Umbono wePine, Invergarry
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGary
Indawo yokuhlala yasePine View ikwilali engasemlanjeni esecaleni komlambo i-Invergarry kwindawo efanelekileyo yokujonga iiNdawo eziphakamileyo zaseScotland kunye neZiqithi.
Eli gumbi lihle kakhulu lamagumbi amabini ligqitywe kumgangatho ophakamileyo kakhulu, libandakanya igumbi lokuphumla elivulekileyo kunye nekhitshi elinendawo yokutyela, ikhitshi leyangoku linezixhobo ezidityanisiweyo ezibandakanya isitya sokuhlamba esinesiqingatha, isipheki sombane kunye nehobhi, ifriji / ifriji kunye nomatshini wokuhlamba. Kukho iTV kwigumbi lokuphumla, iDVD player kunye ne-wi-fi yasimahla.
Igumbi elinye lokulala elinendawo yokunxiba enkulu kwigumbi lokulala eliphambili kunye negumbi lokulala elinamawele (yonke ilinen kunye neetawuli zinikezelwe). Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo linendawo emhlophe eneziqwenga ezintathu ezinethayile epheleleyo eneshawari phezu kwebhafu. Izinyuko zangaphakathi azinazitebhisi kwaye ngoko ke ipropathi ayifanelekanga kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6.
Imihlaba igcinwe kakuhle kwaye igumbi linembonakalo ethandekayo kwindawo engaphambili ukuya kuMlambo iGarry. Kukho indawo yokugcina ibhayisekile egqunyiweyo, umgca wokuhlamba kunye nendawo enengca ekwabelwana ngayo (engabiyelwanga kwindlela enkulu).
Kukho ukuhamba okuninzi okuthe ngqo ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nokuya kude neGreat Glen Way, umgama omde weemayile ezingama-79 ukuhamba kunye nendlela yokukhwela ibhayisekile, udlula kwi-Invergarry. Kuyenzeka ukuba uhambe okanye uhambe ngebhayisekile ukusuka eFort William ukuya e-Inverness ukuphepha indlela enkulu.
Kude kufuphi ne-Invergarry yi-Monster Activities apho amanzi amhlophe e-rafting, abseiling, ukudubula kwehobe yodongwe, ukudubula, ukukhwela i-kayaking kunye nokuhamba ngephenyane kufumaneka.
Ilali ineehotele ezintathu. Ihotele i-Invergarry, ihotele ye-4 yelizwe labahambi, ibonelela ngomlilo welog evulekileyo kunye nebha yokwamkela kunye nendawo yokutyela, ngelixa iRokeby Manor esandula ukuvulwa, emi ngaphandle kwelali, ibonelela ngokutya okuyinyani kwamaNdiya kunye nokwamkelwa ngokufudumeleyo. Ihotele yaseGlengarry Castle, indlu yelizwe leenkwenkwezi ezi-3, ihleli kunxweme lweLoch Oich kunye namabhodlo e-Invergarry Castle, isihlalo se-MacDonnell clan, ebekwe kwiindawo zayo.
Iboniswe kakuhle ipropathi ejongene noMlambo iGarry kwiiNdawo ezintle zaseScotland.
I-Invergarry ibekwe kwindawo efanelekileyo yokutyelela i-Isle of Skye edityaniswe nelizwe ngebhulorho yendlela, kodwa kusengenzeka ukuba uthathe isikhitshane usuka e-Glenelg unqumla indlela emfutshane ukuya eSkye ngePasika ukuya ku-Okthobha.
I-Fort William, i-Outdoor Capital yase-UK, yimizuzu engamashumi amane ukuya emazantsi kunye nommandla omkhulu kuyo yonke imisebenzi yangaphandle kunye nemidlalo yekhephu. Ikwalikhaya kweyona ntaba yethu iphakamileyo, uBen Nevis. Uvavanyo lweMihla emithandathu yaseScottish kunye neNdebe yeHlabathi yeBhayisekile yeeMountain zibanjwa apha ngonyaka.
I-Loch Ness ikumgama oziikhilomitha ezisixhenxe kuphela kunye nelali entle esecaleni komjelo waseFort Augustus ikufanele ukutyelelwa. ILoch Oich, iLoch Ness kunye neLoch Lochy ziyinxalenye yeCaledonian Canal ethathwa ngabaninzi njengenye yeendlela ezinkulu zamanzi ehlabathini. Isuka kwi-Inverness ukuya kwiCorpach edibanisa uLwandle lwaseMantla kunye noLwandlekazi lweAtlantiki.
Ukufika e-Invergarry kulula: ime kufuphi ne-A82 phakathi kwe-Fort William kunye ne-Fort Augustus kwaye malunga neyure enye ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sase-Inverness. Inkonzo yebhasi yesiqhelo phakathi kwesixeko ihamba kufutshane, ngelixa iibhasi zemihla ngemihla eziya nokubuya eSkye zimisa ezantsi kwendlela
Kukhale umnxeba nje